အသင်းကြီးအများစု ရလဒ်ဆိုးနေတာကို ချေဖျက်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့် အင်္ဂလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ
အသင်းကြီး အများစု ရလဒ်ဆိုးနေတာကို ချေဖျက်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့် အင်္ဂလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ
18 Jun 2018 . 4:42 PM
အသင်းကြီး အများစု ရလဒ်ဆိုးနေတာကို ချေဖျက်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့် အင်္ဂလန်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်တချို့ ကစားပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ အသင်းကြီးအများစု ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အာဂျင်တီးနား၊ ဘရာဇီးလ်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီအစရှိတဲ့ အသင်းတွေ နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့သလို လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီအသင်းဆိုရင် ရှုံးပွဲပါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့ညမှာလည်း အင်္ဂလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ အစရှိတဲ့ အသင်းကြီးတွေ အုပ်စုအဖွင့် ပွဲစဉ်တွေကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ပနားမားအသင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက တူနီးရှားအသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းတွေဟာ ကစားသမား အင်အားပိုင်း တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းတွေဖြစ်ပြီး ကစားရမယ့် ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေက ကိုယ့်ထက် တစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့ အသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းကြီး အများစု ရလဒ်ဆိုးနေတာကို အင်္ဂလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံစတဲ့ အသင်းတွေ ချေဖျက် နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
ဆွီဒင် – တောင်ကိုရီးယား (တနင်္လာ ည ၆း၃၀ နာရီ)
ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ရပ်မှာ တစ်ကြိမ်မှ တွေ့ဆုံဖူးခြင်းမရှိတဲ့ အသင်း (၂)သင်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုပါ။ ပြိုင်ပွဲ မတိုင်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ (၂)သင်းစလုံး ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နောက်ဆုံး (၅)ပွဲမှာ (၁)ပွဲစီသာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ခြေစမ်းပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ (၃)ကြိမ်မှာ ဆွီဒင်အသင်းက အသာရထားတယ်ဆိုပေမယ့် (၁)ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ကျန် (၂)ပွဲမှာတော့ သရေကျခဲ့တာဖြစ်လို့ အပြတ်အသတ် အသာစီးရထားလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အခုတစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံမှုမှာ ကစားသမား အင်အားပိုင်း ကွာခြားမှု မရှိဘဲ ဆွန်ဟောင်မင် ဦးဆောင်လာတဲ့ တောင်ကိုရီးယားတိုက်စစ်က ဆွီဒင်တိုက်စစ် ထက်တောင် အနည်းငယ် အသာရနေလို့ တောင်ကိုရီးယားအသင်းကပဲ (၂-၁)ဂိုးလောက်နဲ့ အနိုင်ရသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ – ပနားမား (တနင်္လာ ည ၉း၃၀ နာရီ)
ကစားသမား အင်အားပိုင်း ကွာခြားနေသလို နောက်ဆုံး ကစားတဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေတဲ့ ပနားမားအသင်း ဘယ်လ်ဂျီယံဆီကနေ မျှော်လင့်စရာ မရှိပါဘူး။ အုပ်စု ပထမနေရာကို ရယူနိုင်ဖို့ အခုလိုပွဲစဉ်မှာ ဂိုးပြတ်သွင်းထားဖို့ လိုအပ်နေတာကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတိုက်စစ် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ခြေစွမ်းပြနိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။ နှစ်သင်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံဖူးခြင်းမရှိဘဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ လူကာကူ၊ ဟာဇက်၊ မာတင်တို့ ဦးဆောင်လာမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံတိုက်စစ်ကို ပနားမားတို့ ပွဲချိန်ပြည့် တောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိလို့ ပြတ်သားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း အနိုင်ရသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
တူနီးရှား – အင်္ဂလန် (အင်္ဂါ နံနက် ၁၂း၃၀ နာရီ)
နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ဒ်ရဲ့ အင်္ဂလန်အသင်း အစမ်းသပ်ခံရမယ့် ပွဲဖြစ်ပြီး ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကစားသမား အင်အားပိုင်း ကွာခြားချက် ကြီးမားပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကြီးတွေ ရောက်ရင် ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ အစဉ်အလာကြောင့် ပြတ်သားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်ဖို့တော့ မလွယ်လောက်ဘူး။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဖူးပြီး အင်္ဂလန်အသင်းက (၂-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိထားတယ်။ လက်ရှိစုဖွဲ့မှုအရလည်း အင်္ဂလန်အသင်းကပဲ အနိုင်ရဖို့များနေပေမယ့် (၂)ဂိုးအထက် ပြတ်ဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး။
Photo:YouTube, Shankly Hotel, si.com
အသငျးကွီး အမြားစု ရလဒျဆိုးနတောကို ခဖြေကျြဖို့ ကွိုးပမျးရမယျ့ အင်ျဂလနျနဲ့ ဘယျလျဂြီယံ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ ပှဲစဉျတခြို့ ကစားပွီးတဲ့ အခြိနျမှာတော့ အသငျးကွီးအမြားစု ရလဒျဆိုးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပွီး အာဂငျြတီးနား၊ ဘရာဇီးလျ၊ စပိနျ၊ ပျေါတူဂီအစရှိတဲ့ အသငျးတှေ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့သလို လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီအသငျးဆိုရငျ ရှုံးပှဲပါ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ ယနညေ့မှာလညျး အင်ျဂလနျ၊ ဘယျလျဂြီယံ အစရှိတဲ့ အသငျးကွီးတှေ အုပျစုအဖှငျ့ ပှဲစဉျတှကေို ယှဉျပွိုငျ ကစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ပနားမားအသငျး၊ ဘယျလျဂြီယံအသငျးက တူနီးရှားအသငျးတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလနျ၊ ဘယျလျဂြီယံအသငျးတှဟော ကစားသမား အငျအားပိုငျး တောငျ့တငျးတဲ့ အသငျးတှဖွေဈပွီး ကစားရမယျ့ ပွိုငျဘကျ အသငျးတှကေ ကိုယျ့ထကျ တဈဆငျ့နိမျ့တဲ့ အသငျးတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အသငျးကွီး အမြားစု ရလဒျဆိုးနတောကို အင်ျဂလနျ၊ ဘယျလျဂြီယံစတဲ့ အသငျးတှေ ခဖြေကျြ နိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။
ဆှီဒငျ – တောငျကိုရီးယား (တနင်ျလာ ည ၆း၃၀ နာရီ)
ပွိုငျပှဲကွီးတဈရပျမှာ တဈကွိမျမှ တှဆေုံ့ဖူးခွငျးမရှိတဲ့ အသငျး (၂)သငျး ထိပျတိုကျ တှဆေုံ့မှုပါ။ ပွိုငျပှဲ မတိုငျခငျ ကစားခဲ့တဲ့ ခွစေမျးပှဲတှမှော (၂)သငျးစလုံး ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနိုငျခွငျးမရှိဘဲ နောကျဆုံး (၅)ပှဲမှာ (၁)ပှဲစီသာ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတကာ ခွစေမျးပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ (၃)ကွိမျမှာ ဆှီဒငျအသငျးက အသာရထားတယျဆိုပမေယျ့ (၁)ပှဲသာ အနိုငျရခဲ့ပွီး ကနျြ (၂)ပှဲမှာတော့ သရကေခြဲ့တာဖွဈလို့ အပွတျအသတျ အသာစီးရထားလို့ မဆိုနိုငျပါဘူး။ အခုတဈကွိမျ တှဆေုံ့မှုမှာ ကစားသမား အငျအားပိုငျး ကှာခွားမှု မရှိဘဲ ဆှနျဟောငျမငျ ဦးဆောငျလာတဲ့ တောငျကိုရီးယားတိုကျစဈက ဆှီဒငျတိုကျစဈ ထကျတောငျ အနညျးငယျ အသာရနလေို့ တောငျကိုရီးယားအသငျးကပဲ (၂-၁)ဂိုးလောကျနဲ့ အနိုငျရသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ဘယျလျဂြီယံ – ပနားမား (တနင်ျလာ ည ၉း၃၀ နာရီ)
ကစားသမား အငျအားပိုငျး ကှာခွားနသေလို နောကျဆုံး ကစားတဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနတေဲ့ ပနားမားအသငျး ဘယျလျဂြီယံဆီကနေ မြှျောလငျ့စရာ မရှိပါဘူး။ အုပျစု ပထမနရောကို ရယူနိုငျဖို့ အခုလိုပှဲစဉျမှာ ဂိုးပွတျသှငျးထားဖို့ လိုအပျနတောကွောငျ့ ဘယျလျဂြီယံတိုကျစဈ ဘယျလောကျအတိုငျးအတာအထိ ခွစှေမျးပွနိုငျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။ နှဈသငျး ထိပျတိုကျ တှဆေုံ့ဖူးခွငျးမရှိဘဲ ပထမဆုံးအကွိမျ ထိပျတိုကျ ရငျဆိုငျရမှာပါ။ လူကာကူ၊ ဟာဇကျ၊ မာတငျတို့ ဦးဆောငျလာမယျ့ ဘယျလျဂြီယံတိုကျစဈကို ပနားမားတို့ ပှဲခြိနျပွညျ့ တောငျ့ခံနိုငျစှမျးမရှိလို့ ပွတျသားတဲ့ ရလဒျတဈခုနဲ့ ဘယျလျဂြီယံအသငျး အနိုငျရသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
တူနီးရှား – အင်ျဂလနျ (အင်ျဂါ နံနကျ ၁၂း၃၀ နာရီ)
နညျးပွ ဆောကျဂိတျဒျရဲ့ အင်ျဂလနျအသငျး အစမျးသပျခံရမယျ့ ပှဲဖွဈပွီး ပှဲကောငျးတဈပှဲ ဖွဈလာဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ကစားသမား အငျအားပိုငျး ကှာခွားခကျြ ကွီးမားပမေယျ့ ပွိုငျပှဲကွီးတှေ ရောကျရငျ ခွစှေမျးမပွနိုငျတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ အစဉျအလာကွောငျ့ ပွတျသားတဲ့ ရလဒျတဈခု ထှကျပျေါဖို့တော့ မလှယျလောကျဘူး။ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလား ပွိုငျပှဲမှာ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ဖူးပွီး အင်ျဂလနျအသငျးက (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိထားတယျ။ လကျရှိစုဖှဲ့မှုအရလညျး အင်ျဂလနျအသငျးကပဲ အနိုငျရဖို့မြားနပေမေယျ့ (၂)ဂိုးအထကျ ပွတျဖို့တော့ မလှယျပါဘူး။
အသင်းကြီးအများစု ရလဒ်ကောင်းဖို့များတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်စနေနေ့ပွဲစဉ်များ
စီးရီးအေပွဲစဉ်(၃)မှာ နိုင်ပွဲဆက်ဦးမယ့် ဂျူဗင်တပ်စ်
မွန်ဂိုလီးယားကွင်းမှာ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရယူမယ့် မြန်မာ
by Ko Kyue . 1 week ago